Warshadaha Dharka ee 5-ta ah ee Jumlada loo isticmaalo ee ugu sarreeya Israa'iil oo leh qiime warshadeed
Posted on Waxaa laga yaabaa 17, 2022 Waxaa laga yaabaa 17, 2022 by Fei (aasaasaha)
2 Junas LTD - Warshadaha Dharka la Isticmaalo ee Israel
3 BCR BOROWY - Warshado Dharka laga Isticmaalo ee Israa'iil
4 Dib u warshadaynta Proline LTD
5 DTV TEXTILVERWERTUG GMBH
Marka ay timaado helitaanka jumlada dharka la isticmaalay, Israa'iil waa meel fiican oo laga bilaabo. Warshado badan oo dalka ku yaal ayaa soo saara dhar la isticmaalay oo tayo sare leh, kuwani inta badan waa qaar ka mid ah fursadaha ugu jaban ee la heli karo. Maqaalkan, waxaan ku eegi doonaa shan ka mid ah warshadaha dharka ee ugu wanaagsan ee la isticmaalo ee Israel. Waxaan ka wada hadli doonaa waxa ka dhigaya warshad kasta, sidoo kale waxaan ku siin doonaa macluumaadka xiriirka si toos ah ula xiriirto. Markaa annagoon waxba ka dheerayn, aan isla quusno!
Hissen Global waa alaab-qeybiye la isticmaalo oo heersare ah oo fadhigiisu yahay Guangzhou, Shiinaha, oo la aasaasay 2012. Iyadoo in ka badan 10 sano oo waayo-aragnimo ah u leh warshadaha dharka gacanta labaad, Hissen wuxuu koray si uu u noqdo mid ka mid ah kuwa ugu horreeya ee dhoofinta dharka.
Iyada oo leh shaqaale cajiib ah oo tiradoodu tahay 200 iyo in ka badan 10,000 mitir oo laba jibbaaran oo goobta shaqada ah, Hissen waxa uu gaadhay kobac cajiib ah. Xarumahooda farsamaynta ee khibrad ahaan u qalabaysan waxa ka mid ah 125 khadadka qulqulka ee kala soocida iyo kala saarista dharka la isticmaalay iyo koox u go'an ilaalinta tayada kuwaas oo sameeya hubinta tayada joogtada ah ee dhammaan khadadka kala-soocidda.
Intaa waxaa dheer, si loo bixiyo dharka qaaliga ah ee gacanta labaad iyo wadarta qanacsanaanta macaamilka, Hissen wuxuu sameeyaa 5 jeer hubinta tayada ka hor inta uusan u dirin tiro badan oo baal ah macaamiishooda.
Junas LTD - Warshadaha Dharka la Isticmaalo ee Israel
Junas LTD waxaa la aasaasay 1998-kii isagoo ah jumlad dharka la isticmaalay iyo dhar kale oo la isticmaalo. Tan iyo markaas, shirkaddu si joogto ah ayay u kortay si ay u noqoto mid ka mid ah dhoofiyeyaasha ugu horreeya ee dharka moodada ee ku salaysan Lithuania.
Iyada oo diiradda la saarayo bixinta dharka gacan labaad oo tayadoodu sarreyso oo si tartan ah loo qiimeeyo loona keeno isla markiiba, Junas LTD waxay si dhakhso leh sumcad uga dhex heshay tafaariiqleyda iyo macaamiishaba.
Iyo xarumo badan oo qaybinta oo ku yaal Yurub oo dhan, way u fududahay ganacsatadu inay si sax ah u helaan badeecadaha ay u baahan yihiin markay u baahdaan.
Markaa haddii aad raadinayso dhar la isticmaalay ama dhar jumlo oo gacan labaad ah, ha ka fogaan Junas LTD!
BCR BOROWY - Warshado Dharka laga Isticmaalo ee Israa'iil
BCR BOROWY waa dhoofiye dharka la isticmaalay oo ku yaal Saint-Andiol, France. Shirkaddu waxay ku takhasustay jumlo la isticmaalo dharka iyo u dhoofinta dalal kala duwan oo adduunka ah. BCR BOROWY waxaa la aasaasay 2011 wuxuuna ku jiray ganacsi in ka badan 10 sano.
BCR BOROWY waxay u dhoofisaa dhar la isticmaalay, kabo, alaabo harag ah, iyo alaabooyin kale oo loo dhoofiyo wadamada aduunka. Shirkadda ayaa sumcad weyn ku leh caalamka, waxaana ay caan ku tahay dharka iyo alaabooyinka la isticmaalo oo tayo sare leh.
BCR BOROWY waxay u dhoofisaa dhar la isticmaalay waddamo badan, laakiin inta badan waxa ay u dhoofisaa waxaa loo dhoofiyaa Boqortooyada Ingiriiska, Kanada, iyo Australia.
Haddii aad xiisaynayso inaad ka soo iibsato dhar la isticmaalay BCR BOROWY, waxaad si toos ah ula xiriiri kartaa shirkadda ama waxaad ka heli kartaa alaabtooda mareegaha.
Dib u warshadaynta Proline LTD
Dib u warshadaynta Proline LTD waa jumlo iibiye dharka dib u warshadaynta oo si xawli ah u koraya oo fadhigiisu yahay Liverpool, United Kingdom. Shirkadda waxaa la aasaasay 2019 si ay u siiso meheradaha dharka la isticmaalay iyadoo lagu iibinayo qiimaha jumlada.
Dib-u-warshadaynta Proline waxay hadda shaqaalaysaa in ka badan 100 qof waxayna leedahay dakhli sannadle ah oo dhan 20 milyan ginni. Waxay u kala soocaan dharka la isticmaalay si waafaqsan tayada, ka hor inta aan la siin ganacsiyada sida ganacsatada gacan labaadka ah iyo ganacsatada suuqa.
Dib-u-warshadaynta Proline LTD waxay noqotay alaab-qeybiyaha loo isticmaalo dharka adduunka oo dhan iyadoo ay ugu wacan tahay sida ay uga go'an tahay tayada iyo qiimaha tartanka.
DTV TEXTILVERWERTUG GMBH
DTV Textilverwertung GmbH waa iibiyaha jumlada weyn ee dharka la isticmaalay, kuna takhasusay ururinta, kala soocida, iyo dib u warshadaynta dharka la isticmaalay in ka badan nus qarni.
Xulashadooda ballaaran ee alaabooyinka dharka la isticmaalo waxaa ka mid ah wax kasta oo laga soo bilaabo magacyada magacyada ilaa aasaaska maalinlaha ah, iyaga oo ka dhigaya kuwo caan u ah macaamiisha raadinaya inay iibsadaan dhar tayo sare leh oo la isticmaalay qiimaha jumlada.
Haddii aad u raadinayso dharka la isticmaalay meheraddaada, DTV Textilverwertung GmbH waa meesha aad u aadi karto dharka tayada leh ee la isticmaalay qiimo aan la jabin karin. Haddaba maxaa loo sugay? Maanta online ku booqo oo arag waxa ay kuu qaban karaan!
Gabagabadii, shanta warshadood ee dharka lagu iibiyo ee kor ku xusan waa kuwa sumcad iyo khibrad u leh warshadaha. Haddii aad ku raadinayso dharka tayada leh ee la isticmaalo qiimo macquul ah, mid kasta oo ka mid ah warshadahan ayaa noqon doona doorasho weyn. Waa muhiim in la xasuusto in warshad kastaa ay leedahay meelaha ay ku fiican tahay iyo meelaha ay ku liidato, markaa fadlan samee cilmi-baaris. Khibrad ma u yeelatay la shaqaynta warshadaha dharka ee Israa'iil? Waxaan jeclaan lahayn inaan ka maqalno qaybta faallooyinka ee hoose.
Entry waxa loo posted in Wararka Warshadaha Kabaha La Isticmaalay iyo tagged hissen, 5-ta Warshadood ee Dharka La Isticmaalo ee Jumlada ugu Sarreyso ee Israa'iil.